Ingabe Likhona Idethi Yokukhishwa noma Amahemuhemu Omthelela we-Genshin: I-Kazuha & Venti Banner Rerun Rerun? - Ukudlala
I-beta yesibuyekezo se-Genshin Impact 2.5 iyaqhubeka, futhi silapha ukuze sikunikeze ulwazi lwakamuva kakhulu nge-Yae, kanye nolunye ushintsho kumakhadi akugeyimu.
Kodwa-ke, kunenqwaba yezinye izinguquko ezihlelelwe isibuyekezo esizofika ngemuva kuka-2.5, futhi nakhu konke esikwaziyo kuze kube manje mayelana nabo.
Usuku Lokukhishwa Kwe-Kazuha kanye Ne-Venti Banner Reruns Seluputshuziwe, Ngokusho Kwe-Genshin Impact
Naphezu kweqiniso lokuthi lokhu kuvuza kuwumphumela we-Wangsheng Funeral Parlour Discord, akuveli ngokuqondile kubaholi abavamile bomphakathi. Kunalokho, lokhu kwanyatheliswa kuyi-sussyizigaba zokuvuza, okubonisa ukuthi lokhu kuvuza akuzange kuqinisekiswe ngokuphelele ukuthi kuyiqiniso ngalesi sikhathi futhi akufanele kuthathwe njengokuyiqiniso.
Ovuzayo engxoxweni ngumsebenzisi we-Reddit ogama lakhe lingu-No-Lifeguard4399, othole ukwethembeka okuthile ngenxa yokuvuza okuthile kwe-Yae.
Ngenxa yalokho, lesi isiphetho esingaguquki esifinyelelwa endabeni yokuvuza kwezibuyekezo ezisekude, futhi akufanele kumangaze uma kubhekwa ukuthi akufakazelwanga ngokuphelele ngalesi sikhathi.
Kulandela ukuputshuka, kubukeka sengathi uVenti noKazuha bazobuya komunye umzuliswano ku-2.6 Banner. Lokhu kusho ukuthi sizobe sibabona bobabili laba balingisi ekupheleni kuka-March noma ekuqaleni kuka-April ekuqaleni kuka-April.
Uma kubhekwa iqiniso lokuthi abalandeli abaningi bebelindele ngokulangazela ukuputshuka kwe-Venti isikhathi eside, lokhu kufanele kuze njengezindaba ezamukelekayo kwabaningi babo.
Ekugcineni, ukuputshuka kuphawula ukuthi umcimbi we-Peculiar Wonderland uzobuya ku-2.6 Update, okulindeleke ukuthi ikhishwe maduze. Okuwukuphela kwento esingathembela kuyo wukuhamba kwesikhathi ukuze sinqume ukuthi lokhu kuyiqiniso noma cha.
Yilokho Konke Mayelana Ne-Kazuha & Venti Banner Rerun in Genshin Impact. Hlala ubukele ukuthola izibuyekezo eziningi futhi ubeke uphawu kusayithi lethu ukuze uthole izindaba eziningi zemidlalo kanye nezimemezelo. Ngiyabonga Ngokufunda!
Bheka izindaba EZENGEZIWE zemidlalo:
I-Halo Infinite Isizini 2 Usuku Lokukhishwa: Ingabe Idili Esenziwe?
Ukutholwa Kwabathakathi Isizini 3: Usuku Lokukhishwa: Konke Odinga Ukukwazi!
Ngemuva kokulibaziseka isikhathi eside, i-Gotham Knights manje kulindeleke ukuthi ikhishwe kulo nyaka!
Ukuwa kweBhabhiloni: Idemo Iza ku-PS4 kanye ne-PS5 NgoFebhuwari 25!